संसद् विघटनविरुद्ध उत्रिए पोखरेली कलाकार, साहित्यकार (भिडियोसहित)
शनिबार, पुस २५, २०७७ रुपिन्द्र प्रभावी
पोखरा । पोखराका कलाकार र साहित्यकार प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले गरेका संसद् विघटनका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सङ्गम सांस्कृतिक मञ्च, पोखराको आयोजनामा शनिबार सहिदचोकमा भएको कार्यक्रममा साहित्यकार तथा कलाकारहरुले आफ्ना कविता र गीतमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीको सो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोध गरे । कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष काजी गाउँलेले वैदेशिक इसारामा केपी ओलीले संसद् विघटन गरेका भन्दै देश र जनताका पक्षमा गीत र कवितामार्फत् खबरदारी गरिरहने उद्घोष गरे । केही मात्रामा भए पनि जनपक्षीय रहेको संसद् विघटन गरेको बताउँदै गाउँलेले अब सङ्घीय जनगणतन्त्र र समाजवादसम्म पुग्नका लागि जनवादी शक्तिहरु अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
माक्र्सवादी चिन्तक तथा लेखक रामराज रेग्मीले यसअघिका संविधानहरुको तुलनामा २०७२ को संविधान प्रगतिशील रहेको बताउँदै यसलाई अपहरण गर्ने काम ओलीबाट भएको धारणा राखे । ओलीको कदमलाई २०१७ मा राजा महेन्द्रले गरेका ‘कू’सँग तुलना गर्दै रेग्मीले २०४७ को संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनेर प्रचारबाजी गर्नेहरु नै अहिलेको संविधान कुल्चनेहरु भएको बताए । करिब २ तिहाइ मत पाएको कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानमाथि ‘कू’ गर्नु मामुली कुरा नभएको उनको भनाइ थियो । यो कुनै सनकका भरमा मात्रै आएको कुरा नभई नेपाली नागरिकको सशक्तता मन नपराउने विदेशी शक्तिहरुको इसारामा भएको रेग्मीको भनाइ थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता झलकपाणि तिवारीले सजग हुन नसके अनेकौँ सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा औँल्याए । यो घटना ताजा जनादेशका लागि आएको नभई नेपाली जनताको उपलब्धीलाई अन्त्य गर्ने र नेपाललाई नयाँ ढङ्गले प्रतिगमनतिर लैजाने षड्यन्त्रका रुपमा आएको तिवारीको भनाइ थियो । जनता सचेत भइसकेको बताउँदै तिवारीले संवैधानिक प्रतिगमनका विरुद्ध राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन गर्लान् भनेर मात्रै विश्वास गरेर नबसी बौद्धिक जगत् स्वतन्त्र ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताए । यो कुनै दलबिचको मात्र टकराव नभई नेपाली जनताका विरुद्ध चालिएको कदम भएकाले सचेत नागरिक समाज उठ्न उनले आग्रह गरे ।
शनिबार, पुस २५, २०७७, १७:११:००
प्रतिनिधिसभाको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुँदै ९ घण्टा पहिले